Ị nwere ike inyere m aka na ngwaọrụ nke a pụrụ ịdabere na ya maka Amazon ederede njikarịcha?
Inwe ezigbo ngwaahịa nke kachasị mma maka ecommerce SEO ma jiri ya rụọ ọrụ maka ngwá ọrụ maka Amazon pụtara na ị nwere ike ịdọrọ mmasị nke ndị na-azụ ahịa na-achọ ihe dị na ire ere n'ebe ahụ. Dị ka o kwesịrị, iji tọghata òkè ọdụm nke ndị ahịa a ka na-azụlitebeghị n'ime ndị na-ere ahịa n'ezie na-azụ gị. Ịtụkwasị otu setịpụrụ ederede zuru ezu nke isi isiokwu dị na ebe kwesịrị ekwesị ga-enyere gị aka na nke ahụ. N'ezie, enweghi nyocha niche nke ga-enwe ike ịkwọ ụgbọala ị na-ebufe iji nweta ihe ịga nke ọma kachasị, ọbụlagodi naanị. Na agbanyeghi otu esi eche ya kpọmkwem. M pụtara na ịghọ onye na-ere ahịa n'ezie na Amazon, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa ka a na-enyocha, gbanwee, ma na-atụle ugboro ugboro.
Ikwughị na ọ dị ka ụlọ ahịa ọ bụla brick na-mortar, a na-achịkwa ikpo okwu kọmputa a site na ọnụahịa asọmpi, yana ikike onye ọ bụla na-ere ahịa na ikwenye ntụkwasị obi. Ka o sina dị, n'iji nlezianya mee nchọpụta nyocha zuru ezu site na iji ngwá ọrụ dị mma maka Amazon, ị nwere ike ime ka ihe dị mfe. A sị ka e kwuwe, ọ ga-abụ na ọ bụ naanị ụzọ a ga-esi gosi na ị na-aga n'ihu na ndị ọrụ ndụ na-eleta gị mgbe niile mgbe ha chọrọ ụfọdụ n'ime ihe ndị ị na ere.Ya mere, n'okpuru bụ nhọrọ abụọ dị mma ịhọrọ maka ịhọrọ ihe ị ga-eji nweta ihe ọ bụla ị chọrọ ịchọrọ maka Amazon na nkume nke jupụtara n'ọma ahịa na ndepụta ngwaahịa gị nke gosipụtara na nchịkọta ngwaahịa ahụ n'ebe ahụ.
Okwu Ngwá Ọrụ Dominator
Onye enyemaka mbụ na weebụ m ga-akwado gị maka taa bụ Nchịkọta Ngwaọrụ Dominator. N'etiti akụkụ ya kachasị elu, e nwere ọrụ pụrụ iche nke mkparịta ụka na-enweghị atụ nke nwere ike ịnye gị nnukwu foto nke mkparịta ụka niile dị mkpa na ogologo-ọdụ search nkebi ndụ ndị ahịa na Amazon. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịme ngwa ngwa, na-adị njikere mgbe niile itinye akwụkwọ ọchụchọ ndị a na-atụ aro ka ị na-ewu ewu ugbu a ma nwee atụ anya na ị ga-abanyekwu oge. Site na ngosipụta dị mkpa nke dị na ịnweta ohere ị nwere ike ịme ihe ruru atọ nchịkọta ọchụchọ dị iche iche kwa ụbọchị. Ma ị nwere ike na-akwụ ụgwọ ego na-akwụ ụgwọ 16 iji nweta ndụ zuru oke nke software a.
Onye Ọkà Mmụta Sayensị
Ọ bụ ngwaọrụ ọzọ dị mma maka Amazon, nke kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ na-ewepu okwu mkparịta ụka niile ma ọ bụ search lousy long-tail ahịrịokwu - fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge. Onye na-ere sayensị bụ ngwá ọrụ dị n'ịntanetị iji kwado ndenye aha gị na Amazon na nghọta bara uru bara uru na aro aro bara uru maka aha gị ma ọ bụ ụdị ngwaahịa gị. Ma, rịba ama na iji mee ka ọtụtụ n'ime ndị na-ere sayensị m kwadoro na ị na-agba ọsọ yana Google's Keyword Planner. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-egbochi nsogbu ọ bụla, dị ka ọnweghị ọnụọgụ ọnụọgụ nke metụtara isiokwu ma ọ bụ ogologo oge ọdụ ahịrịokwu nke yiri ka a ga-emegharị ya n'ụzọ na-ezighị ezi Source .